Fiteny ao amin' ny Repoblikan' i Kôngô - Wikipedia
Fiteny ao amin' ny Repoblikan' i Kôngô
Ny fiteny ao amin' ny Repoblikan' i Kôngô dia ahitana fitenin' ny tompon-tany (fiteny banto ny ankamaroany) sy ny fiteny frantsay. Ny fiteny frantsay no fiteny ôfisialin’ ny Repoblikan’ i Kôngô. Ny mponina tsirairay dia miteny amin’ ny fitenin’ ny vondrom-poko misy azy. Ny lalam-panorenana kôngôley dia manao ny fiteny lingala sy kitoba ho fitenim-pirenena ifaneraserana. Ao koa ny fiteny mônôkotoba izay tenenina ao atsimo.
Araka ny filazàn' ny Organisation Internatinale de la Francophonie (OIF), tamin' ny taona 2010 dia nahatratra ny 56 %n' ny mponina kôngôley ny mpiteny frantsay, ka ny 78 %n' izany dia mihoatra ny 10 taona, izany no maha laharana faharoa azy manerana an' i Afrika aorian' i Gabôna, raha ny isan-jato no heverina. Ny 88 %n' ny mponina ao Brazzaville mihoatra ny 15 taona dia milaza fa mahay miteny sy manoratra frantsay.
Nandritra ny ady an-trano nandritra ireo taona 1990 dia misafidy ny teny frantsay ny mponina tsy mahay fiteny kitoba (indrindra ny any atsimo), ny fiteny kikôngô, ny fiteny lingala (indrindra ny any avaratra) mba tsy hahafantarana ny foko niaviany.
Ireo fiteny banto[hanova | hanova ny fango]
Ny ankamaroan' ireo fiteny hafa dia fiteny banto, ary fitenim-pirenena ao amin' io firenena io dia ny fiteny kitoba sy ny fiteny lingala (13 %), manaraka ny fiteny mbôsy, ny fiteny bateke (17,3 %), ary misy fiteny maherin' ny efapolo, izay ahitana fiteny pigmea maromaro (1,4 %) izay tsy fiteny banto.
Ny fiteny kitoba (na monokotoba) dia fiteny kreôly kikôngô notsorina, izay azon' ireo vahoaka miteny amin' ny endri-piteny kikôngô maro. Ampiasain' ny 50,35 %n 'ny Kôngôley monina amoron' ny lalamby Congo-Océan, izay mampitohy an' i Brazzaville amin' i Pointe-Noire any amin' ny tapany atsimon' ilay firenena, ny fiteny kitoba.
Ny fiteny lingala, "fitenin' ny renirano", dia fitenin' ny filoham-pirenena Denis Sassou-Nguesso, sady be mpiteny ao avaratra sy atsinanana. Io fiteny io no nahitana mpiteny haingam-pitombo isa indrindra taona vitsy lasa izay tao amin' ny Repoblikan' i Kôngô. Ny 18 %n' ny mponina dia Bateke izay monina ao amin' ny Departemantan' ny Plateaux, ao amin' ny Cuvette-Ouest (ao amin' io faritra io dia atao hoe Mbety (Mbéti) sy Tege (Tégué) io fiteny io), ao Niari (atao hoe Nzaby (Nzabi) io fiteny io), ao Bouenza ary ao amin' ny faritr' i Pool.
Ny fiteny lary (lari) dia fifangaroan' ny endrika maron' ny fitenin' ny Bakôngô sy Bateke, sady fiteny tenenin' ny olona matetika ao amin' ny faritr' i Pool.
Ny fiteny makoa dia tenenina ao amin' ny tapany avaratry ny lempona, indrindra ao amin' ny tanànan' i Makoua.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_ao_amin%27_ny_Repoblikan%27_i_Kôngô&oldid=1001273"
Voaova farany tamin'ny 10 Febroary 2021 amin'ny 09:27 ity pejy ity.